यस्तो छ कक्षा १२ को परीक्षाको तयारी ! – Daily NpNews
मुख्य पृष्ठ /समाचार/यस्तो छ कक्षा १२ को परीक्षाको तयारी !
बोर्डका अध्यक्ष प्राडा चन्द्रमणी पौडेलले मन्त्रिपरिषदको बैठकले परीक्षाको विषयमा चाडै निर्णय गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । उहांले भन्नुभयो–हामीसंग प्रशनपत्र उत्तरपुस्तिका तयारी अवस्थामा छ । विद्यालयमा पु¥याएर परिक्षा गर्न असम्भव देखिदैन ।
सय भन्दा कम विद्यार्थी भएका विद्यालयमा होम सेन्टर कायम गरी स्वाथ्य मापदण्ड पुरा गरेर परीक्षा सञ्चालन गर्न कुनै समस्या पर्दैन–उहांले भन्नुभयो ।
उहाँले यो साताभित्र बोर्डले प्रतिवेदन बुझाएर मन्त्रालय मार्फत चाडै मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत दिए दशै अघि परीक्षा लिन सकिने बताउनुभयो ।
तर अहिलेसम्म हेर्दै गरिएको प्रतिवेदन कहिले बुझाउने र दशै अघि परीक्षा लिने भन्ने विषयमा सम्भावना कम देखिएको छ । तीन दिन अघि बोर्डको बैठकमा मस्यौदाको विषयमा मत बाझिएको थियो । मत बाझिएपछि परीक्षा गर्ने मितिको विषय अन्योलमा परेको छ ।
अधिकांस सदस्यले अहिलेको अवस्थामा हचुवाको भरमा निर्णय गर्न नहुने बताएका थिए । उनीहरुले अध्ययन गरेपछि राय पेशगर्ने सोही आधारमा मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने बताएका थिए ।
बोर्डका अध्यक्ष प्राडा पौडेल र सदस्य सचिव दुर्गा अर्यालले तयार गरेको प्रतवेदनको विषयमा बोर्डका सदस्यसंग छलफल गरी त्यसको भोलिपल्ट मन्त्रालयमा पेशगर्ने योजना बनाएका थिए ।
अधिकांस सदस्यले मोडलको विषयमा अध्ययन गर्नुपर्ने बताएका थिए । सोही अनुसार बोर्डले सबैलाई प्रतिवेदन मेल गरिएको छ ।
बोर्डका अध्यक्ष प्राडा पौडेलले बोर्ड सदस्यले अध्ययन गनुपर्ने भनेपछि केही दिन बिलम्ब हुने बताउनुभयो । उहांले भन्नुभयो– उहाहरुले अध्ययन गरेर राय दिनुहुन्छ, बैठक बसेर निर्णय गर्नेछौ ।
कोभिड–१९ को कारण स्थगित परीक्षा दशैअघि पहिलो र दशै पछि दुई गरी तीन चरणमा सम्पन्न गर्ने तयारी गरेको थियो ।
दशैअघि गर्ने तयारी गरेका थियौ त्यो सम्भव नहोला जस्तो छ–बोर्डका एक सदस्यले भने । बोर्डले तयार गरेको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पुग्न कम्तिमा पनि एक साता लाग्ने भएको छ ।
एक सातापछि असोज महिना शुरु हुन्छ । मन्त्रालयले अध्ययन गरी आफ्नो राय दिन समय लाग्ने र त्यसो गर्दा कम्तिमा पनि एक साता लाग्ने देखिएको छ । तर बोर्डका अध्यक्ष पौडेलले एक हप्ताभित्र सबै निर्णय गरी १५ दिनको सूचना जारी गरी परीक्षा लिन सकिने जिकीर गर्नुभयो ।
बोर्डले कक्षा १० को जस्तो विद्यालयलाईनै जिम्मा दिने विकल्प हटाएको छ । माध्यामिक तहको अन्तिम परीक्षा भएकोले केही अधिकार बोर्डसंग निहीत हुनुपर्ने तर्क सबैको रहेको छ ।
बोर्डले होम सेन्टर कायम गरी चरणबद्ध परीक्षा लिने विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । त्यसपछि ५० पुर्णाङकको प्रश्न निर्माण गरी ओपन वुक परीक्षालाई बढी जोड दिएको छ ।
ओपन बुक अन्तर्गत विद्यार्थीले प्रश्नपत्र पाएपछि घरमै बसेर परीक्षा दिने केही दिनभित्र उत्तर पुस्तिकालाई विद्यालयमा पु¥याउने र विद्यालयले परीक्षण गरी परीक्षण अंक बोर्डमा पठाउने उल्लेख छ ।
बोर्डले आवश्यकताको आधारमा विद्यार्थीको उत्तरपुस्तिका पुनः परीक्षण गर्ने व्यवस्था सहितको विकल्पलाई होमसेन्टर पछि कार्यन्वयन गर्ने पक्षमा बोर्ड रहेको छ । यो खबर आजको नेपालसमाचारपत्रमा छापिएको छ ।
पिसाब रोकिएकी नानीलाई भर्ना नलिएपछि अस्पताल चाहार्दा-चाहार्दै ज्या’न गयो
कोरोना संक्रमितको संख्या ह्वात्तै बढेपछि अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा बन्द गर्ने निर्णय !